idea: မငိုပါနဲ့ လက်ပတောင်းတောင်ရယ်
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအောင်လံ မိုးထက်လျှံမှ အဓမ္မကို အောင်နိုင်မယ် မိစ္ဆာတွေဘေးက ဝေးကြမယ်
လူသားတိုင်း၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်း(၃)ခုရှိရာတွင် (၁)အစာအိမ် ပိုင်း (၂) နှလုံးသားပိုင်း (၃) ဦးနှောက်ပိုင်းတို့၏စေ့ဆော်မှုအရ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။ လူသား နှင့်
တိုက်ပွဲကို ခွဲခြား၍မရနိုင်သောသဘောရှိပေသည်။ ခေတ်အလိုက် လူသားတို့၏ တိုးတက်မှုနှင့်အညီ တိုက်ပွဲ၏
ပုံသဏ္ဍန်ပြောင်းလဲခြင်းသာရှိနေမည်။အစာအိမ်၏ နပူနဆာလုပ်မှုတို့ကြောင့် ဦးနှောက်သည် ကြံရဖန်ရပြီး လျှင်
တိုက်ပွဲသဏ္ဍန်ကို မဟာဗျူဟာချမှတ်ပေးရသလို နှလုံးသား၏ လှုံ့ ဆော်မှုကြောင့် ဦးနှောက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဝင် လက်နက်ကရိယာတွေကို တာဝန်ယူစီမံဖန်တီးပေးရလေသည်။ ကာလတခုသို့ရောက်လာသောအခါ ထို အစာ
အိမ်နှင့် နှလုံးသားတို့၏ ဆန္ဒတွေကိုမလိုက်လျှောဘဲ ကျိုးကြောင်းဆက်နွယိမှုကို ဆင်ခြင်သည့် ဦးနှောက်ပိုင်း
ဆိုင်ရာအတွေး အခေါ်(သို့မဟုတ်) တရားမျှတမှုနှင့်လွတ်လတ်ခွင့် ဆိုင်ရာ လူသားဝါဒတွေကို ဖေါ်ထုတ်လာ
ခဲ့ကြပါတယ်။သို့သော် အင်အားကြီးဝါဒနှင့်လူသားဝါဒတို့သည်ယနေ့အထိစည်းချက်ဝါးချက်ကိုက်ညီမှု မရှိ
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မွင့်တော်မမူခင် နှစ်တထောင်ကျော်ကာလမှစ၍ သန္ဓေတည်လာသည့် ထိုလူသားဝါဒဆိုင် ရာ စိတ်ပညာရှင်ကြီးများ၏ အဆိုအမိန့် တို့သည် ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ၏ ဘက်တော်သားများပင်ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် အားမကောင်းခဲ့ပါ။ တနေ့ထက်တနေ့ လူသားမျိုးနွယ်တို့၏ ပေါက်ဖွါးလာမှုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ ပြဿနာ တို့သည်လည်းကြီးထွားလာရပေသည်။ပြဿနာတွေကြီးလာသည်နှင့်အမျှ လူစွမ်းကောင်းတို့သည်လည်းထွက် ပေါ်လာခဲ့ကြလေသည်။ထိုလူစွမ်းကောင်းများသည် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကြေငြာပြီး ဘုရင်ဘွဲ့ကိုခံယူလျှက် တိုင်း နိုင်ငံအသီးသီးကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြလေသည်။
ဤကမ္ဘာမြေကြီးအားခွဲဝေယူကြကြပြီးနောက် အစာအိမ်နှင့်နှလုံးသားတို့အတွက် လိုအပ်သော တောင်း ဆိုမှုတွေက ပိုမိုကြမ်းတမ်းလာကြပြီး စစ်ပွဲကြီးတွေ ဆင်နွဲလာရကြပြန်ပါတယ်။ ဘု၇င်တို့သည် အာဏာစက်ကို အ လွန်အကြွံ အသုံးချလာသည်နှင့်အမျှ နောက်လိုက် အခြွေအရံ မူးမတ်သေနာပတိတို့၏ အဂတိလိုက်စားမှု
သည် လည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အကြောင်းအကျိုးကို ဆင်ခြင်တတ်သော
ပညာရှို့သည် အကြွင်းမဲ့ဘုရင်စနစ်(Absolute Monarchism) မှသည် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် (Constitutional Mo-narchism) အဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်းလဲလိုက်ကြပြီးသက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တို့၏အာဏာစက်ကို လျှော့ချလိုက်
ကြ ပြန်ပါရော။ ဤကာလသည် (AD 1100-1400) ခုနှစ်များကာလက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းပညာ
ရှင်တို့က သတ်မှတ်ပါတယ်။ အမိမြန်မာပြည်၏ အင်ပါယာအရှင် မင်းနော်ရထာနှင့် ပုဂံခေတ်ဟု ဆိုရပေမည်။ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်အတော်များများကတော့ ဆက်လက် စိုးမိုးထားနိုင်ဆဲပါ။
သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်နှင့်အတူ နယ်ချဲ့ဝါဒသည် ပင်လယ်ပြင်တွေကိုဖြတ်ကျော်၍ တိုင်းနိုင်ငံအသီး တို့အား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာကြပြန်သည်။ ၁၇၇၅ ခုမှာ အမေရိကန်သည် အင်္ဂလိပ်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲ စတင် ခဲ့ပြီး (၁၇၇၈) ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံက အမေရိကန်ဘက်မှဝင်ေ၇ာက်စစ်ကူခဲ့ရာ (၁၇၈၃) ခုနှစ်တွင် တော်လှန် ရေးစစ်ပွဲကြီးကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ (၁၇၈၈)ခုနှစ်တွင် မတူကွဲပြားသည့် ပြည်နယ်အသီးသီး တို့အား တန်တူညီမျှသောအုပ်ချုပ်ရေး အခြေခံဥပဒေကို စတင်အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်ပြီး (၁၇၈၉) ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့ရာ ( George Washington ) ဂျော့ဝါရှင်တန်က အနိုင်ရပြီး အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးသမတ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပေသည်။ ဤကာလသည် အမိမြန်မာပြည်တွင် အလောင်းမင်းတရားကြီး ၏ ကုန်းဘာင်ခေတ်ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး လူထုအုံကြွမှုကြီး စတင်လာခဲ့ သည့် အချိန်ပင်ဖြစ်လေသည်။
တကယ်တန်းမှာတော့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေကို လက်တွေ့ကျကျ အကောင်ထည်ဖေါ်ကျင့်သုံးခဲ့သော အချိန်သည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူပြိးနှစ်ပေါင်း(၁၇၀)ကျော် ခရစ်တော်မပေါ်မှီ BC,460 ခန့်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂရိ စစ်သူကြီး (Pericles ) ပေရီကလီသည် ထိုခေတ် သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင် နှင့် မူးမတ်တို့၏ အုပ်ချုပ်ပုံ၊ နန်းလုမင်း များ၏ ပရမ်းပတာကျမှုတွေကို တွေ့ကြုံခံစားရပြီးနောက် အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီး အများ၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးကောက်တင်မြောက်သည့် သမ္မတဆန်သောဘု၇င်စနစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး အသက်(၂၀) ပြည့်ပြီးသူတိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ပြီး နိုင်ငံ့ရေးရာတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့၏။ သင်း လုံးကျွတ် လူထုအစည်းအဝေးကြီးတွေကို တက်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး ဂရိဖွဲ့စည်းပုံကို အေသင်မြို့မှာ ရေးဆွဲလိုက်ကြ ပါတယ်တဲ့။
ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် လူမျိုးနွယ်စု (၁၀) စုမှ တစုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၅၀) ဦးကျဖြင့် စုစုပေါင်း ကိုယ်စား လှယ် (၅၀၀) ကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ပါတယ်။ တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ်ရာတွင် လူမျိုးစု(၁၀)စုမှ တစုလျှင် (၁၀)ဦးကျ ရွေးချယ်ကြပြီး ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရေး၊ သမာသ မတ်ရှိရေး၊ အဂတိတရားကင်းစင်ရေး၊ သက်တမ်းကုန်ပါက သူတို့အားပြန်လည်စစ်ဆေးခံစေခြင်း နှင့် တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာငွေကြေးသုံးစွဲမှု မှန် မမှန်စစ်ဆေးရေး တို့ပါဝင်လုပ်ဆောင်၇ပါတယ်။ ထိုခေတ်အခါက အတွေးအခေါ်ပ ညာရှင် ဆိုကရေတီး(Socrates) သည် အခွင့်ထူးခံလူတန်းစာတို့၏အုပ်ချုပ်မှုတော်လှန်ရေးကို အဆိပ်ခွက်ဖြင့် သက်သေတည်ခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ထိုခေတ်ကမ္ဘာသည် သူ့အား ပါရမီဖြည့်စွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပေသည်။
၁၇၈၉ ခု နှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်လှန်ေ၇းသည် ဥယောပတလွှားသို့ ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်း ခေါ်သည့် လှိုင်းလုံးကြီးများ ပြန့်ကားသွားခဲ့သည်။ ဥယောပတ၀ှမ်းလုံး ပျော်လို့ရွှင်လို့မဆုံးနိုင်ခင်မှာဘဲ ခေါင်းဖြတ်လူသတ် ပွဲမှာ တခေါင်းပြီးတခေါင်း အလုံးပေါင်းနှစ်သောင်းကျော်သုံးသောင်း မြေမှာကျခဲ့ရပါတယ်။ နွမ်းလျှနေသည့်နိုင်ငံ တော်ကို ( ၁၇၉၉ )ခုနှစ်မှာ စစ်ဗိုလိချုပ်ကြီး နပိုလီယံဘိုနာဘတ်က စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၁၈၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ ယခင်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရ သောလူဝီ(၁၆)၏ ညီတော် ဘောဘွန်းဘုရင်လူဝီ(၁၈)က အာဏာပြန်သိမ်းလိုက် ပါရော။ အပြောနဲ့ပင် ရင်မောရသည့် ပြင်သစ်နှင့်ဥယောပ ဒီမိုကေ၇စီတိုက်ပွဲများတွင် ဖက်ဆစ်တို့၏ကျူးကျော် စစ်ပွဲ၊စစ်အာဏာရှင်တို့၏ဒေါသ၊ဘုံဝါဒီကွန်မြူနစ်တို့၏မာန၊ဘာသာရေးအစွဲအလန်းနှင့် ဘုရင်စနစ်ကြီးစိုးရေး တိုက်ပွဲများမှသည် ၁၉၁၄ ခုနှစ် ပထမကမ္ဘာစစ် နှင့် ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အပြီးထိ နှစ်ပေါင်း တရာ့ ငါးဆယ်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ဟိုဘက်က ခြင်္သေ့တအုပ် ဒီဘက်ကကျားတအုပ်နှင့် နောက်နား က အခြောင်သုတ်ဖို့ ၀ိုင်းရံနေတဲ့မြေခွေးစုတ်တို့၏ ဘေးမှ လွတ် အောင်ပြေးနေရသည့် ကျွဲအုပ်ကြီးပမာဖြစ်ပေ
လိမ့်မည်။ ပေးဆပ်ခဲ့၇သော အသက်အိုးအိမ်ကုဋေကဋာ၏ အဖိုးအခ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီး
ပေါ်ပေါက်လာပြီး (၁၉၄၈)ခု လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတန်း (Universal Declaration of Human Rights) ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါရဲ့။
၁၀၄၄ ခုနှစ် အနော်ရထာမင်းခေတ်မှ ယနေ့ထိ နှစ်ပေါင်း (၉၇၀) ကျော်အတွင်း တိုက်ပွဲဝင်စာရင်း အင်း နှင့် တိုက်နည်းမဟာဗျူဟာတွေကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် နှစ်လုံးသည်းခြေငြိမ်ဆေးတွေကို အရင်စုဆောင်းထားရ လိမ့်မည်ဟု တင်မိသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာခေတ်နှင့်စစ်ပွဲကို အုပ်စုဖွဲ့ကြည့်ပါက ထီးနန်းလုစစ်ပွဲ။အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် ပွဲ။လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲ၊ ပြည် တွင်းစစ်ပွဲ ၊ အာဏာသိမ်းစစ်ပွဲ နှင့် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ ဆိုတာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ် တယ်။ကမ္ဘာကျော်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးထက်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။နန်းတွင်းကအရှုပ်တော်ပုံများနှင့် ခေတ်မှီလက်နက်တပ်ဆင်ထားသည့်အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲများက စိတ်အားငယ်ရသလို လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည့် အသင်းအပင်း များအကြား အချင်းချင်းအကွဲအပြဲသမိုင်းတွေက စိတ်ကိုရှုပ်ထွေးစေတာ အမှန်ပါ။ လွတ် လပ်ရေးရပြန်တော့ အမွေလုကြတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများအကြောင်းတွေကလဲ မသိတာကမှ ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတခုလုံးကို သူခိုးဇာတ်သွင်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်စာရင်းသွင်းခဲ့သည့် တပါတီအာဏာရှင်စနစ် နှင့် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ။ ၁၉၉၀ ခုရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အပေါ် ကောက်ကျစ်သည့် န၀တစစ်အစိုးရ၏ ရက်စက်မှုများ။ သူတို့လိုချင်တာတွေကို အဓမ္မယူပြီး မကျေနပ်ပါက နောက်ကနေခြောင်းရိုက်လေ့ရှိတဲ့ နအဖစစ် အစိုးရနှင့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး။ တချက်ကလေးမျှ စိတ်မအေးခဲ့ရတာ အားလုံးအသိပါ။
၂၀၁၀ ရောက်တော့ ရဟန်းသံဃာ နှင့် ကျောင်းသားပြည်သူတွေကို ရန်သူတွေလိုဆက်ဆံခဲ့ သည့် စစ်အာဏာရှင်ဘ၀ကို အသွင်ပြောင်းပြီး အစိုးရသစ် Good Government and Clear Government အဖြစ် အသက်သွင်းမည်ဆိုသည့် သမ္မတသစ် ကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို အားလုံးက ကြိုဆိုကြပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဒီမိုကရေစီငတ်မွတ်နေကြသည့် ပြည်သူလူထုက အစိုးရသစ်ရဲ့သဘောထား အပျော့အမာကို စစ်းသပ်လိုက်ကြ တယ်။ အချို အချဉ် အငံ အစပ် ရသာစုံတဲ့ ဟင်းအိုးကြီးအဖြစ် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်ခွင့်ရကြပြီးပြီဘဲ။ ၂၀၁၃ ခု မတ်လရဲ့ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ငိုရှိုက်သံတွေနဲ့အော်ဟစ်သံတွေကို ရုတ်တ၇က်မြင်လိုက်ရ တဲ့အခါမှာတော့ သြော်-- အမေစုရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ လက်ပတောင်းပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀
ပါရမီဟာ စိမ်းစိမ်းကားကား ခြားနားသွားခဲ့ရလေပြီ “အိုအမေစု… ပြည်သူလူထုတွေကို မလှည့်စားပါဘူးဆို….ခုတော့..”ဆိုသည့် အသံတွေက နားထဲမှာ လျှံနေပါရော့လား။
မငိုပါနဲ့လက်ပတောင်းတောင်ရယ်၊ မင်းတို့တတွေဟာ အာဏကိုမက်မောလို့၊ သမ္မတကြီးဖြစ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဒို့အားလုံးကသိပါတယ်။ မင်းတို့ရဲ့တောတောင်သဘာဝတွေကိုချစ်လို့၊ သာသနာအမွေအနှစ် တွေကိုမြတ်နိုးလို့၊သောက်ရေသန့်သန့်လေးကိုသောက်ချင်လို့၊လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေချင်လို့ဆိုတာ ဒို့တတွေ အားလုံက နားလည်ကြပါတယ်ကွာ။
စိတ်မကောင်းဘဲလဲ ဖြစ်မနေကြပါနဲ့ လက်ပတောင်းတောင်ရယ်။ တကယ်တော့ မင်းတို့ရဲံတော်လှန်ရေး ဟာ အဖြူရောင်ရိုးရိုးလေးပါ။ မွှေးနံ့သာထုံတဲ့ စပယ်ရုံတော်လှန်ရေးပါ။ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်၊ မျက်နှာရှိရာဟင်း ဖတ်ပါ၊ ငွေရှိကတရားနိုင်၊ ဘယ်အစိုးရတက်တက် နင်းပြားဘ၀ဟာ နင်းပြားပါဘဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကိုလဲ ဖယ် ထုတ်ပစ်လိုက်ကြစမ်းပါ။ တော်လှန်ရေးရဲ့အရှုံးအမြတ်ဆိုတာ တဒင်္ဂအတွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်လို့မရစကောင်းပါဘူး လေ။ မူယာမာယာတွေထူပြောလှတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာ အဖြူကိုအရောင်ဆိုးချင်ကြသူတွေရဲ့ပဋိယာယ်တွေကိုသတိ
ထား ရှောင်ရှားကူးခတ်ဖို့ကလည်း အေ၇းကြီးပါတယ်။
အစဉ်အလာတွေအရ “ဒီကနေ့တော်လှန်ရေးဆိုတာ အရင်အတိတ်အဆက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေရဲ့ အမွေ အနှစ်ဖြစ်သလို နောင်လာမည့် အနာဂတ်တိုက်ပွဲအဆက်ဆက်တွေရဲ့ ရောင်နီးဦး ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို ကျေ နပ်စွာလက်ခံကြပြီး အကြမ်းမဖက်သောနည်းနာများအား အချိန်ကာလတခု နှင့် ပေါင်းစပ်၍ ဘ၀တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Mo Myintlin at 9:23 PM
အို သူတော်စင် အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့၏ မေတ္တာရေစဉ်သည် အရှင်တို့၏ ဦးခေါင်းတော်မှသွေးတို့ဖြင့် နီစွေးစေခဲ့ပါပြီ။ အို သူတော်စင် အရှ...
ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသည့် မြန်မာသမိုင်းကြောင်းထဲမှ ရှေလျှားထွေပြားလှသည့်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်း ရေတွက်ရန်မစွမ်းနှိုင်တော့သည့် အသက်ကိုစတေးခဲ...
ဌာန(နေရာ)နှင့်ကာလ(အချိန်)တို့၏ ဆက်နွယ်မှုသည် အရှိန်(မောင်နှင်အား)ပေါ်တွင်မူတည်၍ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ် နိုင်ကြော...
အောက်တိုဘာလကုန်တော့မည်၊ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရအတွက်အသုံးစရိတ်ငွေကလည်းပြတ်တော့ မည်ဖြစ်သည်။ဒကါလင်း၏အခြေအနေကတော့ အတော်လေးယိုင်နဲ့...
အရှင်ဂမ္ဘီရသို့ အမှတ်တရ mizzima
သာကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ 21 ရက် 2009 ခုနှစ် 17 နာရီ 49 မိနစ် "ကျုပ်ဘက်ကတော့ အားလုံးကို အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အပြင်မှာရှိနြေ...
ရင်ထဲမှာအစ်နေဆဲ…။ ပစ်ခတ်တဲ့ သေနတ်သံတွေနဲ့ အတူရွတ်ဖတ်နေတဲ့ မေတ္တာသံတွေက လျှံနေဆဲ…။ ပြည့်အန်နေတဲ့ မျက်ရည်တွေကြားမှာတော့ နီစေ...
ကျွန်တော်ယုံကြည်တာက တိုင်းပြည်အင်အားရှိမှ ခေတ်မှီတဲ့ တပ်မတော်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ပြောပြောေ...
Lin Lin (59): “A fighter should first fight himself” Activists Calling U Lin Lin’s Voice
U Lin Lin (not his real name) is 59 years old and an NLD member from Pakkoku. He offers meachoice of three subjects he wants to talk ab...
Waging nonviolent struggle----------
By Gene sharp From the late eighteenth century through the twentieth century ,The technique of nonviolent action was widely used ...
By Gene Sharp (6)
ငြိမ်းချမ်းရေး ငှက်တွေရဲ့ ဆုတောင်းသံတွေနဲ့
ဘယ်တော့မှ ဆွေးမြေ့သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်တော့မှ မေ့မရဘူး. . . .စက်တင်ဘာ
မင်းအတွက် ခခဲ့တဲ့ သွေးတွေ
မင်းအတွက် တခဲ့တဲ့ အလွမ်းတွေ
မင်းအတွက် ရေရွတ်ခဲ့တဲ့ တမ်းချင်းတွေ
တုန့်ပြန်မှုမရှိတဲ့ မိစ္ဆာတွေရဲ့ အူသံတွေအောက်
ငါတို့ဘယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးသီးချင်းတွေ သီဆိုနိုင်မှာလဲ
တစ်ရက်မှ မေ့မရဘူး .. . .စက်တင်ဘာ။
(စက်တင်ဘာ နှစ်ပတ်လည်ကို ဂုဏ်ပြုပါသည်)
ရဲရင့်သော သွေးစက်များ ဘာကြောင့်သွေးမြေကျ။
ရဲရင့်သော သွေးစက်များ ဘာကြောင့်သွေးမြေခ။
လာခြင်းမကောင်းသော သင်တို့ရဲ့ အနုမြူ ယန္တရား
လွင့်ကနဲ. . . . . .၀ဲကျ။
တစ်ဦးတစ်ယောက် မကသော လက်များ
၅။ ၀၉။ ၂၀၀၈
THE BEST FRIEND GROUP
အင်္ဂလိပ်=မြန်မာ ဒေ၇ှင်န၇ီ ဒေါင်းလုပ်ယူ၇န်
လူရည်လူချွန်…………(လူရီ ၊ လူချွံ )
သင်္ခါရ တရားကို မဆန့်ကျင်ဘူး……………..
ခန့်ခန့်ညားညား ကြွေတဲ့ကြယ် (ညမှာ)
ဖုတ်ခနဲဖုတ်ခနဲ ကြွေတဲ့ကြယ်(ညနေ့/ နေ့ည)
"သင်တို့ကို ဘာသားနဲ့လုပ် ၊ ဘယ်သူကထုတ် ……….."
စင်းလုံးချောနေတဲ ကြယ်စင် (အရစ်အရစ်လဲ ထမနေဘူး)
နှလုံးသားနဲ့ လုပ်ပါသည် ၊